ရွာသားသစ်မိတ်ဆက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ရွာသားသစ်မိတ်ဆက်
- ပင်လယ် ပျော်
Posted by ပင်လယ် ပျော် on Jun 8, 2012 in Copy/Paste | 38 comments
ဒီဆိုဒ်လေးထဲက ကိုကို၊ မမ၊ ဘိုးဘိုး၊ ဘွားဘွား၊ ဦးဦး၊ ဒေါ်ဒေါ်၊ ညီလေး၊ ညီမလေးများအားလုံး ကျွန်တော်က မန်ဘာအသစ်လေးပါ…… အားလုံး ခင်မင်စွာဖြင့် ကျွန်တော့်ကို ကျွန်တော် မိတ်ဆက်ပါတယ်…… ကျွန်တော်ပင်လယ်ပျော်လေးပါ……. ပို့စ်တင်ခဲ့ရင် အမှားပါခဲ့ရင် အားလုံးသည်းခံခွင့်လွှတ်ပေးဖို့ အားလုံးကို လေးစားစွာ အကြောင်းကြားအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ…. သူကြီးပွိုင့်ဖြုန်းတီးခြင်း မဟုတ်ပါကြောင်း…….
About ပင်လယ် ပျော်
ပင်လယ် ပျော် has written 1 post in this Website..
View all posts by ပင်လယ် ပျော် →
ရွာသားသစ်လေးကိုကြိုဆိုပါတယ် ……… ပင်လယ်ပျော်ဆိုတော့ သင်္ဘောသီးများဖြစ်နေမလားလို့ကွယ် …. မှားသွားရင်တော့ခွင့်လွှတ်ပါ ……… နောက်ထပ်တင်မယ့် ပို့စ်အသစ်လေးတွေ ကော်မန့်လေးတွေကို မျှော်နေရင်း မမခိုင် ……….
ကွန်မန့် တွေမှာ တွေ့ ဖူးသလိုဘဲ။
သားဦး၊ မြေးဦး ကျွန်တော်ကလူသစ်ပါ နံမည်တူနေလားဗျ
မန်းဂေဇက်ရွှာမှ လှိက်လှဲနွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါတယ်………
နွေးထွေး လှိုက်လှဲ စွာ…ကြိုဆိုပါတယ်..ပင်လယ်ပျော် ။
ပင်လယ်မှာ မပျော်တော့လို့ ကုန်းပေါ်တက်လာရင် .. အဟမ်း…
ကိုပင်လယ်ပျော်ရေ… ကြိုဆိုပါတယ်…အခုချိန်က ရွာထဲမှာ ရှုပ်ရှက်ခတ်နေတာဗျ….
ကိုပင်လယ်ပျော်ရေ.. ရွာထဲက နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ…
တော်သေးတာပေါ့… ပင်လယ်မျှော့ မဟုတ်ပေလို့….
you are warmly wlcmd pa…
ကြံကြံဖန်ဖန် ပင်လယ်ပျော့ပါလို့ ကိုစည်ရယ်။
ပင်လယ်ပျော်ရေ…ကြိုဆိုပါတယ် နောက်တခါဆို ငါးမန်း တကောင်လောက်ဖမ်းခဲ့ပေးပါ။
မင်္ဂလာပါ ကိုပင်လယ်ပျော်ရေ။ ကျွန်တော်လည်း ရွာသားအသစ်စက်စက်ပါခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်ကတော့ ဘယ် သူနဲ့မှမိတ်မဆက်ရသေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီရွာထဲက ရွာသားတစ်ချို့ကိုတော့ ကျွန်တော့်ဘက်က ရင်းနှီးနေပါ ပြီ။ ကျွန်တော်လည်းတစ်ဆက်တည်း သည်နေရာကနေ မိတ်ဆက်ပါရစေခင်ဗျာ။ သူကြီးနှင့် တကွ ရွာသူ၊ရွာသားအားလုံး မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ ကိုယ်ရောစိတ်ပါ နှစ်ဖြာသောသုခတို့နှင့် ပြည့်စုံပါစေကြောင်း ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်။
ကြိုဆိုပါတယ် ပင်လယ်ပျော် နဲ့ ကိုဝင်း ရေ။
သူကြီး စိတ်ညစ်ပြီး မန်ဘာအသစ်တွေ မပိတ်ခင် မြန်မြန် လာကြကွဲ့နော်။
အခု တောင် သူ့ကြည့်ရတာ ဓာတ်ကျ နေပုံဘဲ။
အရီး တို့ စည်းကမ်းတကျ မန့် နေ ပါရက်နဲ့။ ဟိဟိ။
အနိစ္စ ဒုက္ခ အနတ္တတဲ့
ကျုပ်သားလေး ခြောက်မျက်နှာဆော်ထဲ့လိုက်တာ သူကြီး ငွေအိတ်ပိန်သွားလို့ စိတ်တွေညစ်နေရှာတယ်။
နောက် အနုတ်တစ်ကျပ်ခက်လို့ ငါးကျပ်ဘဲပေးမယ် အသံကြားတယ်နော်။
လေးပေါက်ကလည်း သူကြီး တရားရသွားပီလဲဆိုသေးတယ် ..
တရားရပီး အလှူတွေ လုပ်မှာပေါ့ဗျ ..
ဦးလေးသူကြီး များများလှူနိုင်ပါစေ ..
ပင်လယ်ပျော်ရေ ကြိုဆိုပါတယ်။ ရွာထဲမှာ ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ။
ပင်လယ်နဲ့ တသားတည်း ကျနေတဲ့
သယ်ရင်လည်း အဲသလို crew ..
ရှောင်ရမယ့် လူစာရင်းကို လဲ သတင်းကလေးတို့ထား။
အင် ကိုပေါက်ရေ ရှောင်ရမယ့် လူစာရင်း?????
လူသားတစ်ယောက် ဖြစ်ပြီဆိုရင် လူသားတာဝန်ရှိလာသလို…….
ရွာသူား တစ်ယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုတော့လည်း ရွာသူား တာဝန်ရှိတယ်။
တစ်ယောက်တိုးလို့ တမျိုးပိုလှ ဆိုသလို…….
ရပ်ရွာစည်ပင်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် တစိတ်တပိုင်း အားဖြည့်နိုင်ပါစေ။
မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ ပြည့်စုံနိုင်ပါစေ ပင်လယ်ပျော် နဲ့ ကိုဝင်း ရေ…………
သဂျီးအိတ်ကိုထပ်ပိန်အောင်လုပ်လိုက်ပါသည် ။ ကြိုဆိုပါသည် ပင်လယ်ပျော်နဲ့ ကိုဝင်းရေ..
ကိုပင်လယ်ပျော်ရေ.. မန္တလေးဂေဇက်မှာလဲ ပျော်ပါစေ..
ကျွန်တော့်ကိုမိတ်ဆက်တာ အထူးဝမ်းသာကျေးဇူးတင်ပါတယ် မြန်မာစာလက်ကွက်နှေးတာရယ် ကျွန်တော့်စက်မှာ မရှိတာရယ်ကြောင့် စာပြန်နှောင့်နှေးသွားပါတယ် ၊ အားလုံးကိုခင်ပါတယ် ။ ကျွန်တော်ထက်ကြီးလားငယ်လား မိန်းမလားယောက်ျားလားဆိုတာ စာတွေဖတ်ပီး လေ့လာပါမယ်
ဒီရွာထဲကိုဝင်ဖြစ်တာ အကြောင်း (၂) ခုပါ ကော်မန့်တွေကိုသဘောကျပါတယ်။နောက်တစ်ခုက ရွာသားတစ်ယောက်က ဒီဆိုဒ်အကြောင်းကို နားငြီးလောက်အောင်ပြောပါတယ် စိတ်ဝင်စားလို့ ၀င်ဖြစ်တာပါ။ ကျွန်တော်က ပင်လယ်ပျော်ပါ ပျော်လို့ပင်လယ်ထဲသွားတာမဟုတ်ပါဘူး စီးပွားရေးကြောင့် ပါ။ အသက်ကငယ်ပါတယ်။
dream nge10 says:
အားလုံးမင်္ဂလာပါ…………………….လို့ R ဇာနည်လေသံနဲမိတ်ဆက်ချင်ပေမယ့်….ကြောက်တတ်သူမို့ …..မျက်လုံးလေးပေကလပ်ပေကလပ်..လက်သည်းလေးကိုက်ရင်း…မျက်စိသူငယ်နားသူငယ်နဲ ရွာသူ/သား အားလုံးကိုမိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်……………………………………………
ကြိုဆိုပါတယ် ကို ပင်လယ်ပျော် ၊ ko win နှင့် dream nge10 ရေ ။
သူဂျီး ကို အရမ်းအရမ်း သနားနေပါသဖြင့် ၊
၃ ယောက်ပေါင်းပြီးမှ တစ်ခါ မန့်လိုက်ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် အဘ က ပိုက်ဆံ ရမယ့်သူထဲ မပါဘူး မှတ်တယ် ။
အဘက ပြည်ပနေကြောင့်ပေါနော်။ပြည်တွင်း ပြန်ဝင်ပါဗျို့ ။
အဘ က မြန်မာပြည်ထဲ ရောက်လာရင်လေ ၊
အဘ မန်မန်း စားဖို့ နှင့် ၊
အဘ ဟိုနား ဒီနားလေး သုံးဖြုန်းဖို့ ပိုက်ပိုက်ကို ၊
လုံလောက်အောင် မရှာတတ်ဘူးကွယ့် ။
အဘ မန်မန်း ငတ်ပြီး သေသွားနိုင်တယ် ။
နောက်ပြီး အဘရဲ့ Home Minister ကလည်း ၊
အဘ ကို မြန်မာပြည်ထဲမှာ ကြာကြာနေခွင့် မပြုဘူးကွယ့် ။
( လွတ်လပ်ရေးတောင် မရသေးတဲ့ အဘ ဘဝ ပါကွယ် )
အဲဒိတော့ အဘ မြန်မာပြည်မှာ ကြာကြာနေလို့ မရသေးပါကွယ် ။
အဟင့် ။ နေချင်တာပေါ့ ။
သမီးလေးတွေ ဒီလောက်ပေါတဲ့ တိုင်းပြည် ။
အဘ တမီးလေးတွေဆိုဒါ မီးမီးတို့ဂို ကြောတာလားဟင် ……. လူဇိုး ….
ကြို ဆို ဖို့ ကျန်ခဲ့လို့
(ဥူးလေး တဂျီးတော့ အားနာပါတယ်)
နာမည်လေးကမြင်ယုံနဲ့ တင်ခင်စရာကောင်းတာမို့ ခင်ရပါတယ်လို့ နော်..။။
dream nge 10
Mstr Foreign Resident
Ma aungty aye.kk
အာလုံးကို မင်္ဂလာပါ မြန်မာစာလက်ကွက်ကျင့်နေပါတယ် စာတွေကိုမြင်ပြီး connection မကောင်းတာနဲ့ လက်ကွက်နှေးတာကြောင့် အချိန်မီမပြန်နိုင်လို့ခွင့်လွှတ်ပါ အများစုကကျွန်တော့်ထက်အသက်ကြီးမယ်လို့ ထင်ပါတယ်
ပင်လယ်ပျော်ဆိုတော့ ကုန်းပေါ်မှာ ပျော်ပါ့မလား…
ရွာထဲမှာတော့ သိတဲ့အတိုင်း ရန်ဖြစ်လိုက် ပြန်ချစ်လိုက်တွေဆိုတော့ ပျော်သလောက်နေပေါ့နော့။
ပင်လယ်မှ ရွာထဲပျော် ဖြစ်ပါစေလို့
မနော ပြောလိုက်ပါရစေ… ပိုစ့်လေးတွေလည်း မြင်ချင်ပါတယ်။
歡迎 欢迎 (CHINESE)
chào mừng (VIETNAMESE)
ကြိုဆိုပါတယ် ပင်လယ်ပျော်ရေ …ရွာထဲမှာ ပျော်ရွှင်စွာလည်ပတ်နိုင်ပါစေနော် … ။
အရင်က ရွာထဲမှာ မှတ်မှတ်ရရ တောတွင်းပျော်ဆိုတဲ့ တစ်ယောက်ရှိတယ်… ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး … ပင်လယ်ပျော်ဆိုတာလေးတွေ့လို့ …သူ့နာမည်ပါ တဆက်တည်း ပြန်သတိရလာလို့ပါ ။
သဂျီး က ကုလားကွဲ့ 
နောက်ကို နှုတ်ဆက် မင်ဂါ စကားပြောချင်သပ ဆိုရင်
“ ဆလမ်မာလေးကွန်း ” လို့ ပြောပေါ့ကွယ် ။
မင်ဂါပါ နော် ပင်လယ်ပျော်
ကုန် မောင်ပေ ( အဝေးအနီး ကန်ချက်များကြောင့် တစ်ကယ် ကုန်နေသူ ။ )